နိုင်ငံရေးသမားတို့အတွက် အမြင်မရှင်းသည့်မေးခွန်းများ | မြတ်နိုင်
ရှေ့မရောက်လို့ အမျိုးမျိုး အပြစ်တင်နေကြပြီး နောက်ကိုပဲ ပြန်သွားဖို့ စဉ်းစားနေကြတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ???
နိုင်ငံရေးသည် လူတိုင်းနှင့်ဆိုင်သည် ဟု ပြောသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အသက် ၄၂ နှစ်ကျော်မှာ နိုင်ငံရေး စလုပ်တာ ဘာကြောင့်ပါလဲ???
အကျယ်ချုပ်ကျခံနေရသူ တစ်ဦးဖြစ်နေလျှက် ဂျွန်ရက်တော အိမ်ထဲဝင်လာတာကို ပြန်လည်းမလွှတ်၊ သက်ဆိုင်ရာကိုလည်း အကြောင်းမကြားပဲ အိမ်ထဲမှာ ခိုးပြီး တစ်ညလုံးအတူနေခဲ့ရတာလဲ??
အကျယ်ချုပ်က လွတ်ခါနီးမှာ ဒေါ်စုကြည် လွတ်ရင်ဘာလုပ်မလဲ အားလုံးစိတ်ဝင်စားနေတုန်း ဒေါ်စုကြည်က twitter သုံးပါမယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒေါ်စုကြည် twitter သုံးခြင်းက လက်တလော နိုင်ငံတော်အတွက် အရေးအကြီးဆုံး အလုပ်ကြီးများဖြစ်နေလား??? twitter သုံးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်နဲံ့ ပြည်သူအတွက် ဘာတွေလုပ်နိုင်ပါသလဲ??? အဲ့ဒီထက် ကောင်းတဲ့နည်းလမ်း တကယ် မရှိတော့တာလား??? လက်တလော နိုင်ငံရေး ပြဿနာတွေအတွက် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းက twitter သုံးခြင်းလား???
ပထမဆုံး မိန့်ခွန်းမှာ ပြည်သူ့အသံတွေ ကြားချင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ ပြည်သူထဲက ပြည်သူဖြစ်တဲ့ ငါးမင်းဆွေ ပြောတာကို ဘာကြောင့် မကြားချင်ရတာလဲ??? ဘာကြောင့် အကြောင်းမပြန်ရတာလဲ??? ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ ပါတီ က နာမည်မကြိုက်လို့ အထက်ကို မတင်နိုင်ပါဘူး လို့ ဘာကြောင့်ပြောရတာပါလဲ???
နူကလီးယား လက်နက်များအပါအဝင် တစ်ချက်တည်းနှင့် လူသန်းပေါင်းများစွာကို သေစေနိုင်တဲ့ လက်နက်များထုတ်လုပ်နေသော အမေရိကန်နိုင်ငံကို မြေမြုပ်မိုင်းလေးတွေ လုပ်တာ တားမြစ်ဖို့ ဒေါ်စုကြည်က ဘာကြောင့် တိုက်တွန်းခိုင်းရတာလဲ???
NLD အပါအဝင် ပါတီအားလုံး မှတ်ပုံမတင်ရင် ပျက်မယ်ဆိုတာ သိသိကြီးနဲ့ ပျက်ချိန်ကို သုံးလကြာအောင် ထိုင်စောင့်နေခဲ့ပြီးမှ ခုမှ ဘာလို့ NLD ပြန်ရပ်တည်ဖို့ ကြိုးစားရတာလဲ???
ရွေးကောက်ပွဲဝင် ပါတီခေါင်းဆောင်တွေက ဒေါ်စုကြည်ရဲ့ သဘောထားကို ဆန့်ကျင်ကာ ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ခဲ့တာ ဒေါ်စုကြည်နဲ့ ပါတီခေါင်းဆောင်တွေ အချင်းချင်း သိကြပါလျှက် ခုမှ သဘောထားချင်းတူပါတယ်၊ လက်တွဲပါမယ် လို့ ပြောနေကြတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ???
မီဒီယာများအနေနဲ့ လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေထက် လက်တလော ဒေါ်စုကြည် ဘုရားသွားတာ၊ ဈေးသွားတာနဲ့ လေဆိပ်သွားတာကို စိတ်ဝင်တစား ဖော်ပြနေကြတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ???
နိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများထက်၊ လုံးဝမပက်သတ်တော့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်ကိုမှ နိုင်ငံရေးသမားတို့ စိတ်ဝင်တစား ဝေဖန်၊ သုံးသပ်နေကြတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ???
တပ်မတော်တစ်ရပ်လုံး သို့ ပြောစရာစကားများ ရှိပါက စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေးနှင့် အုပ်ချုပ်မှုရေးများတွင် လက်ရှိ လုံးဝ ပက်သတ်မှုမရှိတဲ့ ရုရှားရောက် ပညာတော်သင် အရာရှိများသို့သာ ဦးတည် ပြောနေကြတာဘာကြောင့်ပါလဲ???
မြန်မာ့ပြည်တွင်းသတင်းဌာနကို သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိလို့ စွပ်စွဲကြပြီး ရိုင်းစိုင်းမှုမပါတဲ့ ပုံမှန်ဆွေးနွေးတဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက်အမြင်တွေကိုတောင် လွတ်လပ်မှုကို အသက်တမျှ မြတ်နိုးတယ်လို့ တကြော်ကြော် အော်နေပေမယ့် မကြိုက်တဲ့ ဘလော့တွေ ဆိုလဲ ဘန်းပစ်တာတွေ၊ သတင်းဌာနတွေဆိုလည်း မဖော်ပြတာတွေ၊ ကော်မန့်တွေ ဖျက်ပစ်တာတွေကို အံ့သြောဖွယ် အစဉ်တစိုက် လုပ်ဆောင်နေကြတာဘာကြောင့်ပါလဲ???
ဆွေးနွေးညှိနိုင်းမှုကို လိုလားကြောင်း ပြောနေကြပြီး ဆွေးနွေးညှိနိုင်းရင်း အသာစီးမရင် ညစ်ညမ်းတဲ့ အသုံးအနှုံးတွေနဲ့ ဆဲရေးတိုင်းထွာကြတာဘာကြောင့်ပါလဲ???
သံဃာဖြစ်ပြီး သံဃာနဲ့မဆိုင်တဲ့ အလုပ်ကိုမှ လုပ်နေသူ သံဃာတွေနဲ့ အနုပညာရှင်ဖြစ်ပြီး အနုပညာနဲ့မဆိုင်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်နေတဲ့သူတွေကိုမှ နိုင်ငံရေးသမားတို့ ချီးကျူးလေးစားနေကြတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ???
အစိုးရဟာ ပြည်သူတွေကို မကြည့်ဘူး၊ ရက်စက်တယ်လို့ အော်ကြပြီး တဖက်မှာ တစ်နိုင်ငံလုံး ပြည်သူတွေကို ထိခိုက်စေမဲယ့် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကို ဘာမှမကြည့်ပဲကို အားရ၀မ်းသာ ထောက်ခံကြိုဆိုမှုတွေ၊ တိုက်တွန်းမှုတွေကို ရက်ရက်စက်စက် လုပ်နေကြတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ???
ဒေါ်စုကြည်နဲ့ သူ့သားနဲ့ တွေ့ချိန်မှာ မုဒိတာတွေ ပွား ကိုယ်ချင်းစာနိုင်ပြီး ရှေ့တန်းရောက် တပ်မတော်သားတွေရဲ့ အိုးအိမ်နဲ့ ၁၀ နှစ် ၁၅ နှစ် စွန့်ခွာခဲ့ရတာကို ကိုယ်ချင်း မစာနိုင်တာဘာကြောင့်လဲ???
တစ်ဖက်မှာ စစ်ပွဲကြောင်ထွက်ပြေးလာတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ အခက်အခဲတွေကို ရိုက်ပြပြီး နောက်တစ်ဖက်မှာ စစ်ပွဲ အတွန့်ရှည်ဖို့အတွက် အကူညီပေး၊ အလှူခံ ပံ့ပိုးတဲ့ အလုပ်တွေကို မျက်နှာပြောင်တိုက် လုပ်နေကြတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ???
တစ်ဖက်မှာ နှစ်သက်သောသူကို အမေတပ်ခေါ်နေပြီး နောက်တစ်ဖက်မှာ မနှစ်သက်တဲ့သူကို တိရစ္ဆာန်အမျိုးမျိုးနာမည်တွေနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းရိုင်းစိုင်းနေတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ???
တစ်ဖက်မှာ နိုင်ငံတော် တိုးတက်ဖို့ ပညာတက်၊ လူငယ်တွေ အများကြီး လိုတယ်ပြောနေပြီး၊ တစ်ဖက်မှာ ဒုတ်ကောက်နဲ့ လမ်းလျှောက်နေကြရတဲ့ အဘိုးကြီးတွေကပဲ ထိုင်ခုံပြည့်ယူထားတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ???
စက်တင်ဘာ တော်လှန်ရေး(ခေါ်) ဘုန်းကြီးဆူပူမှုမှာ ဦးဆောင်တဲ့ ဘုန်းကြီးတွေက စကားဝဲတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ ဖြစ်နေတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ???
သတင်းထောက်တွေ သတင်းယူတာကို ဆူပူကြိမ်းမောင်လွှတ်တဲ့ NLD ရုံးက အစောင့်တွေအကြောင်းကို အကျယ်တဝင့် မပြောပြကြပဲ မသိဟန်ဆောင်နေကြတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ???
တစ်ဖက်မှာ ကမ္ဘာက ထုတ်ပြန်တဲ့ ဘာသာရေးနဲ့ စီးပွားရေး အဆင့်သက်မှတ်ချက်တွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံ နိမ့်ကျသွားတာကို အသံကျယ်ကျယ် အော်နေပြီး၊ နောက်တစ်ဖက်မှာ ဘာသာရေးလုပ်နေတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေကို ဘာသာရေး စိတ်မဝင်စားအောင်၊ စီးပွားရေး အေးအေးချမ်းချမ်းလုပ်နေတဲ့ ပြည်သူတွေ လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်ပြီး ကုန်ဈေးနှုံးတက်အောင် လုပ်နေကြတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ???
တစ်နေရာရာမှာ ဗုံးပေါက်ပါက ချက်ခြင်း တစ်ယောက်တစ်ပေါက်ဖြင့် အမျိုးမျိုး အစိုးရကို လက်ညိုးထိုးကြ၊ ဗုံးပေါက်သဖြင့် အလွန် ရက်စက်ကြမ်းကြုပ်ကြောင်းရေးသားကြပြီး အစိုးရအတိုက်အခံ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုက ဖောက်ကြောင်း အဖြေပေါ်ချိန်တွေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲထောက်ခံပြီး နောက်တစ်ကြိမ်ဆိုလျှင် အစိုးရနေအိမ်များကို ဖောက်ရမည်ဟု ကြွေးကြော်ကြတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ???
တစ်ဖက်မှာ လက်နက်ကိုင်မှုနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုကို ရှုံ့ချကြပြီး ဒေါ်စုကြည်ကို ကန့်ကွက်သည့်တစ်ယောက်အား လိပ်စာပေးကြ၊ လုပ်ကြံခိုင်းကြနှင့် အားပါးတရ အာပေးနေကြတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ???
တစ်ဖက်မှာ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ဆူပူကြဖို့၊ သူရဲပေါမကြောင်ဖို့ သူရဲကောင်း တစ်ဦးပမာ လှုံ့ဆော်ရေးသားနေသော်လည်း တစ်ဖက်မှာတော့ မိမိနာမည်နှင့် နေရပ်လိပ်စာအမှန်ကိုတောင် ဖော်ပြဖို့ဝန်လေးကြ၊ အသိမခံရဲဖြစ်နေကြသည်မှာ ဘာကြောင့်ပါလဲ???
တစ်ဖက်မှာ ကမ္ဘာ့အလည်မှာ အထင်သေးခံရသဖြင့် မကျေနပ်ကြောင်း ရေးကြသော်လည်း၊ တစ်ဖက်မှာတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံအကြောင်း အထင်ကြီးစရာတွေကို ကမ္ဘာသိအောင် ဘာတစ်ခုမှ မတင်သည့်အပြင် ကိုယ်တိုင်က အထင်သေးစရာ ဓာတ်ပုံများနှင့် ဗွီဒီယိုဖိုင်များကိုသာ တင်နေကြတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ???
မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူ အတိုက်အခံတို့မှ ကုလသမဂ္ဂသို့ ပို့တဲ့ အိပ်ဖွင့်ပေးစာဆိုတဲ့ စာတွေမှာ မြန်မာလို တွေရေးထားပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ မြန်မာလူငယ်များသို့ ဆိုပြီး ပြောထားတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်မှာ ဘာကြောင့် အင်္ဂလိပ် ပြောထားရတာပါလဲ??
အွန်လိုင်း၊ ဘလော့နဲ့ facebook တွေပေါ်မှာ အန်တီစု၊ အန်တီစုဆိုပြီး တအားချစ်ပြနေကြသူတွေ၊ အကျယ်ချုပ်ကျတုန်းက ကိုယ်ချင်းစာသနားနေကြသူတွေက ခု လို လွတ်လပ်သွားချိန်မှာ ကိုယ်တိုင် သွားမတွေ့ကြပဲ အင်တာနက်ပေါ်ကပဲ ဓာတ်ပုံကြည့် စုတောင်းပေးနေကြတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ??? (ကိုယ့်နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့ ကုလနဲ့ ကန်က လူတွေတောင် တကူးတက လာတွေ့နေကြတာ။ အမှန်တကယ် အရမ်းချစ်ရင် လူကိုယ်တိုင်သွားတွေ့သင့်တယ်၊ ဘယ်သူ ကိုယ့်အလုပ်အပျက်ခံပြီး သွားတွေ့နိုင်ကြလဲ??? တကယ်တော့ ဘယ်သူမှ မချစ်ပါဘူး… ဒေါ်စုကြည်ကို အသုံးချနေကြတာပါ…)
၄။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဘယ်သူက ကြယ်သီးဖြုတ်ခိုင်းတာလဲ?? ကြယ်သီးဖြုတ်တာ ဒီမိုကရေစီလား??
၅။ ဒီလူတွေကို ဘယ်သူက ခုံပေါ်မှာ မထိုင်ခိုင်းတာလဲ?? လူ့သားချင်း အခွင့်ရေးတန်းတူဆိုတာ ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ??
၆။ ဒီလူတွေကို ဘယ်သူက ကန်တော့ခိုင်းတာလဲ??
၇။ ဒီလူတွေကို ဘယ်သူက လက်အုပ်ချီခိုင်းတာလဲ??
၈။ ဒီဘုန်းကြီးတွေကိုရော ဘယ်သူက မာတုကာမ ပုံကို ဘုရားဘေးမှာ ထားပြီး ကန်တော့ခိုင်းတာလဲ??
၉။ မြန်မာလူမျိုးချင်း လက်အုပ်ချီခံနေရတဲ့ ဒီမြန်မာအမျိုးသမီးက ဘာဖြစ်လို့တိုင်းတပါးသားတွေကိုမှ လက်အုပ်ချီချင်ရတာလဲ?? လက်အုပ်ချီတာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုလား?? ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကရော နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ တွေ့ချိန်တိုင်းမှာ လက်အုပ်ချီခဲ့လား??
၁၀။ ဒီလူကြီးကို ဘယ်သူအတင်းအိမ်ထဲခေါ်ပြီး ပြန်မလွှတ်တာလဲ??
၁၁။ လွှတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်တွေကို ဘယ်သူတွေက အမြဲပြောပြီး ပြောတဲ့သူတွေကို ဘယ်သူတွေက ပါးစပ်လိုက်ပိတ်နေသလဲ??
၁၂။ အမေရိကန်သည် ကိုးကွယ်စရာလား??
၁၃။ အမေရိကန်ရဲ့ အကျင့်က ဘာလဲ??
၁၄။ ဒီကပြားက ရဲ့ အကျင့်ကရော ??
၁၆။ မြန်မာ့ အမျိုးသားဖခင်ကြီးရဲ့ မျိုးဆက်ကို မြန်မာနာမည်တွေနဲ့ အဆုံးမသတ်အောင် ဘယ်သူလုပ်ခဲ့တာလဲ??
၁၇။ ဘုန်းကြီးတွေကို လမ်းဘေးသစ်ပင်မှာ စာရွက်ကပ်ပြီး ဆွမ်းခံကြွခိုင်းတာ ဘယ်သူလဲ??
၁၈။ ဒီလူတွေက ဘယ်ကပိုက်ဆံတွေနဲ့ စားသောက်နေကြတာလဲ??
၁၈။ ဒီလူတွေက ဘယ်က ပိုက်ဆံတွေနဲ့ စားသောက်နေကြတာလဲ?
၁၉။ ဘာမှအသုံးမတည့်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ပြည်သူတွေဆီ ညာရောင်းတာ ဒီလို စားသောက်ကြဖို့လား??
၂၀။ ဘာမှ အနုပညာမပါတဲ့ ဒီပုံကို ပန်းချီကားပါဆိုပြီး မြန်မာ ပြည်သူတွေဆီကို လိုက်ရောင်းတာ စားဖို့သောက်ဖို့လား??
၂၁။ လူငယ်တွေ ယောင်္ကျားလေးတွေ စုနေတာ ဈေးရောင်းခိုင်းပြီး ဝင်ငွေရှာဖို့လား??
၂၃။ ဒီအဘိုးကြီးတွေကို ဘယ်သူက ပင်စင်မပေးသေးတာလဲ??
၂၄။ ဒီအဖိုးကြီးတွေကို ဘယ်သူက အိမ်မှာ မအိပ်ခိုင်းတာလဲ??
၂၇။ ဒီအဖိုးကြီးကို ဘယ်သူက အိကျီအရောင်မျိုးစုံဝတ်ခွင့် ပိတ်ထားတာလဲ??
၂၈။ ဒီလူတွေက တော်လှန်ရေး သူရဲကောင်းတွေတဲ့လား?? ဒီလူတွေကို ဘယ်သူက လမ်းဘေးမှာ ထိုင်ခိုင်းထားတာလဲ?? ဒီမိုကရေစီအတွက်လား??
၂၉။ ဒီလူတွေကို ဘယ်သူက သူ့ဘာသူနေတဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို ဖျက်ဆီးခိုင်းတာလဲ?? ဒီမိုကရေစီ ရသွားရင် ဘာတွေထပ်ပြီး ဖျက်ဆီးအုံးမှာလဲ ??
၃၀။ ဒီလူတွေကို ဘယ်သူက လမ်းဘေးအုတ်ခဲတွေ ထုချေခိုင်းတာလဲ?? ဒီမိုကရေစီရဖို့ အုတ်ခဲတွေထုချေရလား??
၃၁။ ဘာမှမသိသေးတဲ့ လူငယ်တွေကို လက်ပတ်တပ်ပေးပြီး တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား အမည်ခံပေးတာ ဘယ်သူတွေလဲ??
၃၂။ ဒီလူတွေကို ဘယ်သူက ဒီအလုပ်လုပ်ခိုင်းတာလဲ?? ဘာအတွက်လဲ??
၃၃။ ဒီလူကြီးကို ဆိုက္ကားပေါ်မှာ ဘယ်သူအတင်း က ခိုင်းတာလဲ??
၃၄။ လူသတ်လက်နက်တွေကိုင်ထားတဲ့ စစ်သည်တွေက မျက်နှာဖုံးတွေ ဘာလို့တပ်ထားကြတာလဲ??
၃၅။ နာမည်သေချာမသိတဲ့ ဒီလူတွေကို ဘယ်သူက အတင်းဆန္ဒပြခိုင်းတာလဲ??
၃၆။ လေးစားပါတယ် ဆိုတဲ့ သူရဲကောင်းနာမည်ပေးထားတဲ့ လူတွေကို လမ်းဘေးခြေနင်းဖက် မှာ တန်းစီချတာ ဘယ်သူတွေလဲ??
၃၇။ ပွဲလုပ်စရာ ခေါင်းစဉ်မရှိတိုင်း ဒီလို ဘာမှန်းမသိတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေ whiteboard ပေါ် ချရေးပြီး ပွဲတွေလုပ်ခိုင်းတာ ဘယ်သူတွေလဲ??
၃၈။ ကရင်အိကျီမချွတ်တဲ့…၊ ကရင်လူမျိုးတွေကို အရမ်းချစ်တဲ့ ကရင်မလေးက ဘာလို့ကရင်ပြည်နဲ့ အဝေးကြီးမှာ သွားနေရတာလဲ??
၃၉။ ဒီလူတွေက မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေလား?? ကရင်လူမျိုးကို သိပ်ချစ်တဲ့ လူတွေလား?? သူတို့ဝတ်ထားတဲ့ ဝတ်စုံဒီဇိုင်းက ကရင်ပုံပေါက်ရဲ့လား?? နိုင်ငံခြားရောက်နေတာကို ခုမှ ဘာလို့ ကရင်ဝတ်စုံက ဝတ်ချင်ရတာလဲ?? ကရင်လူမျိုးကို သိပ်ချင်တဲ့ ဒီကရင်တွေကို ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ အဝေးကြီးမှာဘယ်သူ အတင်းနေခိုင်းတာလဲ
၄၀။ ဒီလူတွေက ဘယ်နိုင်ငံက ဘာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေလဲ?? (ခြေအိပ်နက်နဲ့မွန်ဝတ်စုံ၊ ရှူးနဲ့ ရှမ်းဝတ်စုံ၊ ကုတ်နဲ့ ကရင်ဝတ်စုံ၊နက်ကတိုင်+ကုတ်+ရှူးနဲ့ ချင်းဝတ်စုံ၊ ရှူးနဲ့ ကချင်ဝတ်စုံ)
၄၁။ ဒီမြန်မာလူငယ်တွေက ဘာလို့ ASS (ဖင်) လို့ ဒီမှာ လာရေးရတာလဲ?? ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ဒါလား??
၄၂။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဟော်ဟစ်ဆဲဆိုတာ ဒီမိုကရေစီလား ??
၄၃။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ညစ်ညမ်းတဲ့ အပြုအမူကို လုပ်ပြတာ ဒီမိုကရေစီလား ??
၄၄။ ဒါက ဘာလုပ်နေတာလဲ?? ဒီမိုကရေစီအတွက်ပဲလား??
၄၅။ ဒီလူတွေကရော ဘာလုပ်ကြတာလဲ?? ဒီမိုကရေစီ အတွက်ပဲလား??
၄၆။ ဒီလူကြီးကို ဘယ်သူတွေက ဒီအလုပ်လုပ်ခိုင်းတာလဲ?? ဘာအတွက်လဲ??
၄၇။ အရှက်မရှိ ကိုယ်လုံးတီးချွတ်ပြီး လမ်းပေါ်ထွက်အော်တာ ဒီမိုကရေစီလား ??
၄၈။ ဒီလူကြီးကို ဘယ်သူတွေက ကိုယ်လုံးတီးချွတ်ခိုင်းတာလဲ?? ဘာအတွက်လဲ??
၄၉။ ဒီကောင်မလေး မဆုမွန် ကို ဘယ်သူက ဘုန်းကြီးနဲ့ အတင်းကြိုက်ခိုင်းတာလဲ??
၅၀။ ဒီကောင်မလေး (မဗေဒါ သမီး မေကိုလတ်) ကို ဘယ်သူအတင်းရိုက်ပြီး ရုရှားကို သွားခိုင်းတာလဲ??
၅၁။ ဒီကောင်မလေး (မဗေဒါ သမီး မေကိုလတ်) ကို ထိန်းခဲ့တဲ့ ငယ်နိုင် က အဲ့လိုနေဖို့ သင်ပေးလိုက်တာလား??
၅၂။ ဒီလူတွေက ဘယ်အမျိုးနွယ်က ဆင်းသက်ပြီး နိုင်ငံအတွက် ဘာတွေလုပ်နေကြတာလဲ??
၅၃။ ဒီကလေးစစ်သားတွေက စစ်တပ်ကလား ??
၅၄။ အဖေကို အရမ်းချစ်တဲ့ ဒီကောင်မလေးကို သူ့အဖေနဲ့ အဝေးကြီးမှာ ဘယ်သူက နေခိုင်းတာလဲ??
၅၆။ အလံသစ်ကို မကြိုက်လို့လမ်းလည်ခေါင်မှာ ချနင်းကြတာ ဘယ်သူတွေလဲ??
၅၇။ အလံဟောင်းကို မကြိုက်လို့ ချနင်းတာ ဘယ်သူတွေလဲ??
၅၇။ အလံဟောင်းကို မကြိုက်လို့ချနင်းတာ ဘယ်သူတွေလဲ??
၅၈။ အလံဟောင်းကို မကြိုက်လို့ မီးရှို့တာ ဘယ်သူတွေလဲ?
၅၈။ အလံဟောင်းကို မကြိုက်လို့ မီးရှို့ကြတာ ဘယ်သူတွေလဲ??
၅၉။ ကိုယ့်နိုင်ငံအလံကိုတော့ ချနင်းပြီး သူများနိုင်ငံအလံကို လွှင့်ထူဆန္ဒပြတာ ဘယ်သူတွေလဲ??
၆၀။ ထမိန်ဝတ်နဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးကို အမေရိကန်အလံ ဘယ်သူလွှင့်ခိုင်းထားတာလဲ??
၆၁။ ဒီတိရစ္ဆာန်ကို ဘယ်သူတွေက အလံပေါ်တင်ပြီးလွှင့်ချင်နေကြတာလဲ??
၆၂။ ကိုယ့်နိုင်ငံအလံကို သူများနိုင်ငံသားတွေ ချနင်းအောင် ဘယ်သူတွေလုပ်နေကြတာလဲ??
၆၃။ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်နဲ့ မြန်မာဆိုတဲ့ သိက္ခာကို နိုင်ငံတကာကြားမှာ အရှက်ကွဲအောင်ဘယ်သူတွေလုပ်နေကြတာလဲ??
၆၄။ ရုံးရောက် ဂတ်ရောက်နဲ့ မြန်မာလူမျိုးကို အရှက်ရအောင်လုပ်နေတာ ဘယ်သူတွေလဲ??
၆၅။ နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးကို အရှက်ရအောင် အမျိုးမျိုးလုပ်ပြီး ရသမျှ အထောက်အပံ့တွေနဲ့ ပျော်ပါးစားသောက်နေတာ ဘယ်သူတွေလဲ ??